यसरी थाहा पाउनुहोस् योनीको क्यान्सर ! (भिडियोसहित ) « Himal Post | Online News Revolution
यसरी थाहा पाउनुहोस् योनीको क्यान्सर ! (भिडियोसहित )
प्रकाशित मिति : २०७४, १० आश्विन २०:५६
क्यान्सर दीर्घ र नसर्ने रोग हो । यो रोगलाई निकै भयावह रोगको रूपमा लिइन्छ । क्यान्सर जुनसुकै उमेर समूह र लिङ्गका मानिसमा हुनसक्छ । विशेषतः महिलामा लाग्ने क्यान्सर मध्ये योनी क्यान्सर एक हो । योनी क्यान्सर के हो, कसरी लाग्छ र कसरी बच्ने भनी स्त्री तथा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सृष्टि श्रेष्ठ प्रजापतिले यस्तो सुझाव दिएकी छन् ।
कुनै समय क्यान्सरको उपचार असम्भव मानिन्थो । तर, वैज्ञानिक आविष्कारसँगै क्यान्सरको प्रकृति हेरी उपचार सम्भव भएको छ । महिलामा लाग्ने क्यान्सर मध्ये योनी क्यान्सर पनि एक हो । यौनाङ्गका कोषिकाहरू असामान्य रूपमा वृद्धि भई त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिनु नै योनीको क्यान्सर हो । योनीकोे क्यान्सर पाँच प्रतिशत महिलामा लाग्ने गरेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । योनीको क्यान्सरबाट धेरै महिला पीडित छन् ।
योनीको क्यान्सर हुने कारण यस्ता छन् ।
♦ ह्युमन प्यापुलमा भाइरसको संक्रमण ।
♦ कुनै पनि छालामा लाग्ने रोगलाई बेवास्ता गर्दा योनीको क्यान्सरको रूपमा परिणत हुन सक्छ ।
♦ धेरै व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क राख्नु ।
♦ योनी फोहोर राख्नु । महिनावारी भएको बेला फोहोर कपडा वा प्याडको प्रयोग गर्नु । (जसले गर्दा योनीमा संक्रमण हुन्छ र पछि यही संक्रमण क्यान्सरमा परिणत हुन्छ ।) यो क्यान्सर महिनावारी सुकेका माहिलामा बढी सम्भावना हुन्छ ।
♦ योनीको बाहिरी भागको छालाको रङ्ग सेतो सेतो देखिने गरी परिवर्तन हुनु ।
♦ योनी वरीपरिको छाला चिलाउनु ।
♦ योनी पोल्नु ।
♦ सेतो पानी बग्नु ।
♦ सधैँ योनी सफा राख्ने ।
♦ धेरै व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क नराख्ने ।
♦ स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिने ।
♦ कम्तीमा वर्षको एक पटक योनी परीक्षण गराउने ।
♦ हाम्रो समाजमा यौनाङ्गमा लाग्ने रोगको बारेमा खुलेर अझै पनि कुरा गर्न संकोच मानिन्छ । जसले गर्दा योनीमा धेरै रोग लाग्ने सम्भावना बढी छ । यस्तो अवस्था आफैले बेला बेलामा योनीको राम्ररी अवलोकन गर्ने ।
♦ कुनै शङ्का लाग्न साथ गराउने परीक्षण ।
उक्त खबरलाई हामीले हाम्रो डाक्टरबाट साभार गरेका हौ